उत्तम मार्केटिंग ब्लग
सबै भन्दा राम्रो मार्केटिंग ब्लग!
आइतबार, मे 9, 2010 आइतबार, मे 9, 2010 Douglas Karr
त्यहाँ त्यहाँ केही उत्कृष्ट मार्केटिंग ब्लगहरू छन्, तर म विश्वास गर्न चाहन्छु कि हामीले के सँगै राखेका छौं सबै भन्दा राम्रो लेखहरू वास्तवमै प्रत्येक शीर्षकमा छन्। के हामी सबै भन्दा राम्रो छौं? यो असम्भव छ, हैन? निश्चित - हामी ग्राहकहरूको संख्या, अनुयायीहरू, फ्यानहरू र निर्धारण गर्न को लागी मनपर्ने को प्रयोग गर्न सक्दछौं ... तर त्यो सूचक होईन सबै भन्दा राम्रो, त्यो को सूचक हो मनपर्ने or सर्वाधिक लोकप्रिय.
तपाइँको कम्पनी, तपाइँको उत्पादन वा तपाइँको सेवा सबै भन्दा राम्रो हो भनेर भन्दै केहि कारणहरुका लागि सब भन्दा बढि पदोन्नति युक्तिहरु मध्ये एक हुन सक्छ:
मानिसहरू यसलाई विश्वास गर्छन्। मानिसहरूले तपाईंलाई शंका र इच्छाको लाभ दिन्छन् चाहनुहुन्छ तपाईले भनेको कुरा सत्य हो भनेर विश्वास गर्न। राजनीतिज्ञहरूले यो धेरै समय अघि सिकेका थिए ... मतदाताले के सुन्न चाहन्छन् भन्छन्, र त्यसपछि तपाईले अफिसमा जब चाहानुहुन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्।
यो एक आत्म-पूरा भविष्यवाणी हो। तपाईं उत्तम हुनुहुन्छ भनेर भन्नाले यो वास्तविकतामा परिणत हुन्छ जब तपाईं यो विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईं आफैंलाई उच्च मापदण्डमा राख्न थाल्नुहुन्छ र सँधै यो कुरा निश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाईं प्रतिस्पर्धाहरूको बीचमा खडा हुनुहुन्छ।
यसले प्रतिस्पर्धालाई डिफेन्समा राख्छ। जब तपाईं उत्तम हुनुको फाइदाहरू प्राप्त गर्न जारी राख्नुहुन्छ, तपाईंको प्रतिस्पर्धा तिनीहरू वास्तवमै दोस्रो स्थानमा छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न छोडियो।
मलाई यो हप्ता सोधेको थियो कि यो एक धोकापूर्ण युक्ति हो कि होइन। म छलको वकालत गरिरहेको छैन र म राजनीतिलाई सामान्य रूपमा तुच्छ ठान्छु। यसको सट्टामा, म व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आफुलाई उत्तम बजार बजारको लागि प्रोत्साहित गर्दै छु - र त्यो आशामा डेलिभर गर्नुहोस्।
यसको एक राम्रो उदाहरण अनलाइन मार्केटरहरूको Make Money Online समूह हो। तिनीहरूले केवल आफ्नो साइटहरू र संसाधनहरूलाई उत्तमको रूपमा प्रमोट गर्दैनन्, तिनीहरू पनि व्यक्तित्व सिर्जना गर्न ठूलो निवेश गर्छन् जुन तिनीहरू हुन् सबैभन्दा सफल व्यक्तिहरू अनलाइन। (व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि उनीहरूको मार्केटिंग तिनीहरूको सेवाहरू लगानीमा परिणाम भन्दा राम्रो छ ... तर त्यो केवल मेरो विचार हो।)
यस कार्यनीति प्रयोग गर्नबाट तपाईंलाई के रोकिरहेको छ? तपाईं केमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ परिभाषित गर्नुहोस् र आज यसलाई प्रमोट गर्न सुरू गर्नुहोस्।
यहाँ सिलिकन प्रेरीमा इनोवेशन छ
भिडियो: सोशल मीडिया क्रान्ति 2
मई 20, 2010 मा 8: 15 PM
म उत्कृष्ट मार्केटिंग टेक ब्लगको अंश हुन पाएकोमा गर्व गर्दछु!